» टिकटकमा भाइरल ललितपुरको डरलाग्दो अचम्मको हल्लिने ठाउँ को वास्तविक रहस्य यस्तो रहेछ! थाहा पाउँदा सबै चकित (भिडियो हेर्नुहोस) टिकटकमा भाइरल ललितपुरको डरलाग्दो अचम्मको हल्लिने ठाउँ को वास्तविक रहस्य यस्तो रहेछ! थाहा पाउँदा सबै चकित (भिडियो हेर्नुहोस) – हाम्रो खबर
टिकटकमा भाइरल ललितपुरको डरलाग्दो अचम्मको हल्लिने ठाउँ को वास्तविक रहस्य यस्तो रहेछ! थाहा पाउँदा सबै चकित (भिडियो हेर्नुहोस)
टिकटकमा भाइरल ललितपुरको डरलाग्दो अचम्मको हल्लिने ठाउँ को वास्तविक रहस्य यस्तो रहेछ! थाहा पाउँदा सबै चकित (भिडियो हेर्नुहोस) ***भिडियो हेर्न यहाँ थिच्नुहोला..*** काठमाडौँ । चर्चित नायिका शिल्पा पोखरेल र छवी ओझा प्रकरण फेरी एक पटक चर्चामा आएको छ । केही समय अघि अर्की नायीका शिल्पा पोखरेलले उनका श्रीमान छवि ओझाका विषयमा दिएको अभिब्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको भएता पनि यो विषय अझै किनारा लागिनसकेका कारण यो विषय फेरी एक पटक चर्चामा आएको छ । छविको चौथो पत्निका रुपमा रहेकी शिल्पाले डि/र्भो/स मागेपछि यो विषयले चर्चा पाएको हो ।”